Shirka Madaxda Midowga Afrika oo Ka Furmay Magaalada Addis Ababa • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Shirka Madaxda Midowga Afrika oo Ka Furmay Magaalada Addis Ababa
Shirka ay leeyihin madaxda Ururka Midowga Afrika ayaa maanta ka furmey magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya kaas oo sanadkii mar ay yeeshaan madaxda waddamada ku bahoobay Ururka.
Furitaanka shirka waxaa kasoo qaybgalay masuuliyin kala duwan oo uu kamid yahay Xogheyaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon,Madaxweynaha dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy iyo madaxda Ururka Midowga Afrika.
Markii la furey shirka waxaa hadal ka jeediyey Xogheyaha guud ee Qaramada Midoobay oo isagu ku dheeraaday qalalaasaha ka taagan waddamada Masar iyo Tunisia,isagoo ugu baaqay madaxda waddamadaas in ay tixgeliyaan xuquuqda ay leeyihin dadka banaanbaxyada dhigaaya.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy oo isna hadalo ka jeediyey furitaanka shirka ayaa ugu baaqay Qaramada Midoobay in waddamada Afrika kursi laga siiyo waddamada joogtada ah ee xubno ka ah Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay.
Shirka ayaa waxaa sidoo kale hadalo kasoo jeediyey Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika Jean Ping oo isagoo soo hadal qaaday arimaha Soomaaliya,wuxuuna ballanqaaday in Ururkiisa taageerayo Dawladda Federaalka.
Shirkaan ayaa lagu wadaa inuu soo dhamaado maalinta berito iyadoo laga soo saari doono qodobo ku aadan waxyaabaha ay ka shireen,waxaana dhanka Soomaaliya uga qaybgalaaya Madaxweyne Shariif oo hadal ka jeedin doona.